I-china OEM 30639780 ne-30639781 CONTROL ARMS Ye-VOLVO -Z5148 abakhiqizi nabaphakeli | TANGRUI
I-OEM 30639780 ne-30639781 CONTROL ARMS Ye-VOLVO -Z5148
KUNGANI UKULAWULWA KWEZIKHALI KUBALULEKILE?
Izilawuli zengalo zinikela ngephuzu lokuxhuma nepivot phakathi kokumiswa kwemoto yakho ne-chassis. Imvamisa ixhuma ifindo lokushayela kuhlaka lomzimba, lawula izingalo zifaka amalunga ebhola kanye nama-bushings asebenza ngokuhlangana ukugcina ukulandelwa kwamasondo okulungile kanye nokuma. Isibonelo, ingalo yokulawula ephansi isiza ekubekeni indawo yesondo ebude nobude ngenkathi imoto ihamba.
Lawula izingalo zimelana nenqwaba yamandla okulayisha, njengokusheshisa / ukubopha amabhuleki, ukujikajika ngenkathi ujika nesisindo esimisiwe somzimba wemoto. Futhi banomsebenzi owengeziwe wokugcina ukuqondanisa kwamasondo okunamandla. Lokhu kwehlisa umsindo odluliswayo, ukushaqeka komgwaqo nokudlidlizela ngenkathi kunikeza ukumelana nokunyakaza okungamisiwe okungafuneki.
Ngokuya ngokulungiselelwa kokumiswa (i-Multi-Link, iMacPherson, i-Double Wishbone), izingalo zokulawula zingabekwa ekumisweni kwangaphambili nangemuva, kuzo zombili izindawo ezingaphezulu nezingezansi.
Ngokuxhumanisa ukumiswa kwesobunxele nangakwesokudla kwemoto kubha ye-stabilizer, izixhumanisi ze-stabilizer zigcina amasondo ngobude obufanayo futhi anciphise ukuqhuma komzimba wemoto.
Yini eyenza izingalo zethu zokulawula zikhulu kangaka? ITangrui inika ochwepheshe onqenqemeni, ngokusungula yonke ingxenye yengalo yokulawula. Ngokwesilinganiso, ukufaka izingalo zethu zokulawula kuthatha isikhathi esincanyana esingu-30% ngoba amalunga ebhola nama-bushings afakwe ngaphambilini. Onjiniyela bethu bagxila ekwenzeni izingxenye zethu zibe lula ukufaka futhi zakhiwe ukuhlinzeka ngempilo yesevisi ende. Sisebenzisa ukujeziswa kokuqina kokuqina, siqinisekisa yonke idizayini entsha ukuqinisekisa ukuthi uthola ukusebenza ongakuthemba.
Oluvala amasondo langaphambili, kwesobunxele, Lower VOLVO XC90 [03-11]
Oluvala amasondo langaphambili, Kwesokudla, ezansi i-VOLVO XC90 [03-11]
Isitifiketi IS016949 / IATF16949
Langaphambilini I-OEM BS1A-34-350 BS1A-34-300 CONTROL ARMS YeMazda -Z5147
Olandelayo: Izikhali Zokulawula Ikhwalithi Ephakeme ze-OEM 54500-3S000 Ye-HYUNDAI SONATA-Z5149
Izikhali Zokulawula Ezandisiwe
Izitembu Zokulawula Izinsimbi Eziqinile
Izikhali Zokulawula Tubular
UKULAWULA AMA-ARM FOR TOYOTA-Z5144
I-OEM TD11-34-300B ne-TD11-34-350B CONTROL ARMS ...
I-Tangrui ngokwezifiso Isilawuli Ingalo Ifanele ...
Hight Quality Control Izikhali OEM 54500-3S000 Fo ...
8E0407510A IZINGA ZOKULAWULA zeVolkswagen Passat-Z ...
Front Adjustable Upper Control Arms Ifanele Fo ...
I-Bolt Shock Absorber, Ihabhu Lesondo, I-Rubber ye-Shock Absorber, Iqhubu langaphambili Lokuqondisa, ITire Ball Joint, Isifaki seHood Shock,